သံလျင်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
သိန္း 100 မွ သိန္း 1000 ထိ သံလျင်မြို့နယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
ဈေးနှုန်း သိန္း 100 မွ သိန္း 1000 ထိ
သံလျင်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူများ / အခန်းပြန်ငှားလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေသော (312 Sqft) (၆)လွှာ ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9977613 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သံလျင် မြို့မစျေးအနီး ဗိုလ်ချုပ်ရပ်ကွက် ပတ်ဝန်းကျင်သန့် တိတ်ဆိတ်သောနေရာ အမြန်ရောင်းမည် (၃၇x၅၆) 2BN br အိပ်ခန်းပါ အဲကွန်း၂လုံး အဝီစိတွင်းပါ အရောင်း ၇၅၀သိန်း ညိနိုင်း နိူင်းပါသည်...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10167521 အတွက် သုဝဏၰ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သုဝဏၰ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10160834 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09420094681, 09444337702, 095043558, 09774665277
အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. ပိတ်ရန်
Star City Condo, Studio Type အခန်းသန့်အရောင်း။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10160806 အတွက် Golden Myanmar Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
092060003, 09444474602, 09444474603
Golden Myanmar Estate ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10159761 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095041674, 018393173, 018394415, 095041674, 018393173, 018394415
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10148805 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09444337702, 09420094681, 095043558, 09774665277
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10147981 အတွက် Golden Myanmar Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10147691 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
100 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10136167 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
City Loft (Star City) မှ Studio Unit အရောင်းရှိသည်။
620 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10129938 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10128905 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန်လျင်မြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ တစ်ဖက်ကမ်း နှင့် ပဲခူးမြစ်၏ လက်ဝဲဘက်ကမ်းတင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြစ် ၊ ပဲခူးမြစ်နှင့် ပုဇွန်တောင်ချောင်းတု့ိဆုံ မြစ်ဝနှင့် သုံးမိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသောမြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ ယခင်က ရန်ကုန်နှင့် သွားလာရန် သင်္ဘော ၊ လှေ တို့ဖြင့်သွားလာရပေမယ့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်က တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် ဆောက်လုပ်ထားသည့် သန်လျင်တံတားကြီးဖွင့်လှစ်လိုက်သည့်အတွက် သွားလာရ လွယ်ကူသောမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်လာသည် ။ သန်လျင်မြို့နယ်၏ အကျယ်အဝန်းသည် ၃၅၀.၄၉ ကီလိုမီတာရှိပြီး အထက်တန်းကျောင်း ၄ ကျောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့၏ အရေးပါသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းများလည်းတည်ရှိသာ မြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) နှင့် သမဝါယမတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တို့ သန်လျင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည် ။ သီလဝါဆိပ်ကမ်း ၊ သန်လျင်ရေနံချက် စက်ရုံ ၊ သန်လျင်မြို့မဈေး အစရှိသည့် အရေးပါသော အဆောက်အဦးများတည်ရှိသည် ။ အထင်ကရ ဘုရားစေတီများဖြစ်သည့် သန်လျင်ရေလယ်ဘုရားနှင့် ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ခေါက်စေတီ အစရှိသည့် တန်ခိုးကြီးဘုရားများသည် သန်လျင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည် ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘုရားပွဲများကျင်းပပြီး အလွန်စည်းကားသိုက်မြိုက်သော နေရာလည်းဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် သန်လျင်မြို့နယ်သည် ရန်ကုန် တစ်ဖက်ကမ်းတွေတည်ရှိပေမယ့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သလို မြေကွက်အလွတ်များ ပေါများစွာကျန်ရှိနေသေးသည့် မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေသည် ။